China Steel Tray Frame fanamboarana sy orinasa | Rainbow
Ny fanaka vita amin'ny metaly dia mampiasa fitaovana metaly, mora mahatsapa automatique fanodinana, avo lenta ny mekanisialy, manatsara ny fahombiazan'ny mpiasa, mampihena ny vidin'ny vokatra, izay tsy azo ampitahaina ny fanaka vita amin'ny hazo. namboarina indray mandeha ...
Ny fanaka vita amin'ny metaly dia mampiasa fitaovana metaly, mora mahatsapa automatique fanodinana, avo lenta ny mekanisialy, manatsara ny fahombiazan'ny mpiasa, mampihena ny vidin'ny vokatra, izay tsy azo ampitahaina ny fanaka vita amin'ny hazo. Mamolavola amin'ny indray mandeha. Mamorona efamira, boribory, tendrena, fisaka ary endrika hafa samy hafa. Ary koa amin'ny alàlan'ny fametahana metaly, fametahana, fanariana, famolahana, fanamafisana ary fanodinana hafa mba hahazoana endrika fanaka vy samy hafa. Tsy ny fampiasana fotsiny no ampiasaina, fa koa afaka mahazo ny valin'ny haingon-trano ambonin'ny loko amin'ny alàlan'ny electroplating, spraying, coating plastika ary teknolojia fanodinana hafa.
Kitay vy vita amin'ny vy
Alloy sa tsia
Faharoa na tsia
Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa
Karazana vokatra 1
Nandoko na nopetahana vovoka
Fonosana tsy tantera-drano, amboara na be,
Fanaka, fefy, firafitra
Isaky ny fangatahana
Manohitra ny hamandoana
Fanapahana amin'ny paipa
Misy fomba efatra lehibe amin'ny fanapahana fantsona: manapaka, manapaka volafotsy, manodina manodina, manapaka totohondry, manapaka ampahany amin'ny faran'ny famaritana mazava tsara. Ampiasaina amin'ny ampahany amin'ny masinina amin'ny fantsom-pivezivezena izay mila mampiasa angovo fitehirizana angovo capacitive, miaraka amin'ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta, saingy mora mihena ny paika, ary tery ny faritra fampiharana azy.
Ny fantson-tsoroka dia matetika ampiasaina amin'ny firafitry ny fononteny, ny teknolojia fantsom-piko dia manondro ny fitaovana milina manokana, miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana manokana hiondrika ny fantsona ho lasa teknolojia fanodinana arc. Ny fantsom-panafody dia mizara ho fehin-drano mafana sy fametahana mangatsiaka. Ny hiondrika mafana dia ampiasaina amin'ny fantsona misy rindrina matevina na fotony matevina, saingy zara raha ampiasaina amin'ny fanaka vy. Ny fomba fanerena mahazatra ampiasaina dia misy ny tsindry mekanika, tsindry hydraulic, tsindry amin'ny tanana, sns.
Fitrandrahana sy fikapohana
Ny ampahany vy amin'ny ankapobeny misy visy na rivets mitambatra, ireo faritra ireo dia tsy maintsy voaravaka na totohondry. Fitaovana fandavahana amin'ny ankapobeny dia mampiasa fandavahana dabilio, fandavahana mitsangana ary fandavahana herinaratra tanana, indraindray amin'ny endriny dia hampiasaina slot ihany koa.
Ny fomba fanao mahazatra dia misy ny welding lasantsy, ny welding elektrika, ny angovo fitehirizana angovo sns sns.
Ny velaran'ny faritra dia tokony ho electroplated na mifono. Misy karazany roa ny fomba fandrakofana: ny famafazana loko metaly sy ny loko elektroforesis.
Aorian'ny fanitsiana farany, ny ampahany dia mivondrona ao anaty vokatra misy visy sy rivets arakaraka ny fomba fampifandraisana samihafa.
Teo aloha: Fantsona fampidirana Concrete Strut Channels
Manaraka: Famaritana mazava tsara amin'ny takela-by vy-plasma CNC
Fametrahana mazava tsara amin'ny vy vita amin'ny vy nandrisika T BAR
Sodina manarona vovoka ho an'ny fanondrahana rano sy fi ...
Sodina vy namboarina
Sodina Steel / Torque Steel Sodina